40 Casharro Cajiib Ah Oo Wax Ka Bedelista Qoraalka | Abuurista khadka tooska ah
40 Casharro Cajiib Ah Oo Wax Ka Bedelista Qoraalka ah
Carlos Sanchez | | General, Photoshop, Khayraadka
U beddelashada qoraal kasta naqshad run ahaantii layaableh oo dadka ka yaabisa ma aha hawl fudud, waana sababtaas sababta nooc kasta oo casharro ah oo arrinta ku saabsan oo naga caawinaya inaan sameyno wax cajiib ah loo qiimeeyo.
Ka boodka ka dib waxaan kaaga tagayaa 40 casharro aad u wanaagsan (ugu yaraan kuwa aan soo arkay) waana hubaal inay wax badan kuu tari doonaan. Dabcan, sidii loogu soo ururiyey Naqshadaynta Pro Blog Hagaag, waxay ku qoran yihiin Ingiriis, laakiin waxaan ka shakisanahay inay tani dhibaato badan kugu tahay, haddii ay tahayna, waa inaad tixgelisaa ku hadalka luqadda Shakespeare si fiican., maadaama naqshadeynta ay tahay wax aasaasi ah.
Sida loo Abuuro Sawir-qaade Stereoscopic ah oo loogu talagalay Daawashada Sawirka Isha
Casharradan ayaa ku bari doonta sida loo abuuro sawir muuqaal ah oo loo yaqaan 'stereoscopic image' oo loogu talagalay daawashada indhaha oo waxaad awoodi doontaa inaad ku daawato sawirka ugu dambeeya 3D iyo midab buuxa oo aan lahayn waxyaabo kale.
Waxaa luntay Jaangooynta Hawada Sare ee Photoshop
Baro sida loo abuuro saamayn qoraal fudud oo aad u dhakhso badan Photoshop. Waxaad ku ciyaari doontaa buraashyo kala duwan, Noocyada isku dhafka ah iyo miirayaasha aasaasiga ah sida Baadhka iyo Liquify.
Qarax 3D iyadoo la adeegsanayo Qalabka Photoshop
Casharkaan waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro qarax 3d ah Qalabka Burushka iyo Qalabka Qiijinta iyadoo la adeegsanayo Photoshop iyo qaababkeeda caadiga ah. Casharradan sidoo kale waxay ka kooban yihiin talaabooyin kooban oo hagaya sida loo abuuro loona hirgeliyo qoraalkaaga 3d ee u gaarka ah.
Naqshadeyso Cajiib Burburinta Bixinta Badweynta ee leh Meel Hillaac ah oo ku taal Photoshop
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan abuurista muuqaal qabow-muuqaal ah, Splashing Ocean Text Effect oo leh hillaac Taariikhda Photoshop.
Saamaynta Qoraalka Madadaalada ee Photoshop - Kala duwanaansho aan xadidnayn
Abuur saameyn maskaxeed waali ah iyo halabuur loo isticmaali karo xayeysiinta.
Tababarka Photoshop: Qoraalka Birta ah
Baro sida loogu abuuro saameyn macdan fudud qoraalka.
Sida Loo Abuuro Qoraalka Birta Eroded ee leh Photoshop
Casharradan ayaa ku bari doonta sida loo abuuro saamaynta qoraalka birta ah ee duugoobay. Waxaad sidoo kale baran doontaa farsamooyinka sawirrada kala duwan, kanaalada, iyo qaababka.
Sida Loo Abuuro Saameyn Qoraal Xarago Leh
Baro sida loo abuuro qoraal xarrago leh 13 tallaabo oo keliya.
Ku abuur nooc macquul ah qoryaha
Casharradan ayaa ku tusi doonta sida loo sameeyo qoraalka caadiga ah ee la moodo in lagu rinjiyeeyay ama lagu daabacay alwaax iyadoo la adeegsanayo saameyn qoraallo kala duwan. Tani waa hab fiican oo lagu siiyo qoraalkaaga muuqaal dabiici ah. Tan waxaa lagu dabaqi karaa qaab kasta oo adag, qoraal, sawirro, astaamo, iwm.
Ku Samee Qoraal Faneed Nukli Naafeed ah Photoshop
Casharradan degdegga ah waxaad ku baran doontaa sidaad u sameysid qoraal nacnac nacnac fudud.
Abuur Qoraal Qurxoon oo 3D ah
Casharradan waxaa kuxiran farsamooyin, talooyin iyo tabaha lagu hagaajinayo socodka shaqadaada iyo xirfadaha naqshadeynta. Waxaad ka heli doontaa tan macluumaad macluumaad ah oo waxtar leh casharradan.
Ku abuur Saameyn Qoraal Transparent leh Caws Cusub
Abuur qabow raadinaya Trasparent Text Effect, oo ku qasaaya Fresh Grass Texture iyo Cloud Brush set. Waxaad u adeegsan kartaa saameynta qoraalka dhowr jeer oo kala duwan - sida asalka cinwaanka websaydhka, qayb ka mid ah naqshadda dabiiciga ah ee dabiiciga ah, iwm.
Jelly Fish Farxad - Tutorial Photoshop
Tabobar dhiirigalin leh oo la abuuray iyadoo la adeegsanayo farsamooyin kala duwan si loo abuuro asal jilicsan oo leh jellyfish dhalaalaya.
The 1 Lakab Bubble Text Saamaynta!
Cashar barasho xiiso leh oo ku saabsan sameynta Buubble Text Effect oo leh Hal Lakab oo keliya.
Tababar Milicsi oo Xun
Baro sida loo abuuro "Milicsi Qarsoon" qoraalka. Waad ku tijaabin kartaa qaabab ka duwan inta aad baran doonto waxaana laga yaabaa inay qasab noqoto haddii aad ka shaqeyneyso cabirro kala duwan.
Astaanta AVIAN Studios
Ku soo celi Logo-ga 'AVIAN Studios Logo' adoo adeegsanaya Photoshop.
Tabobar: Naqshadeeye 3D "Poster Design" oo leh 3DS Max & Photoshop
Baro sida loo abuuro gacan ku dhiigle 3D Poster Design leh 3DS Max & Photoshop.
3D Saamaynta Qoraalka Jungle
Casharradan Photoshop waxay sharxi doonaan sida loo xaqiijiyo saamaynta qoraalka hawdka 3D. Waxaad ku abuuri doontaa qoraalka Xara3d waxaadna u adeegsan doontaa Photoshop si aad xarfaha ugu marto.
Saamaynta Qoraalka Dhimashada
Casharkaan waxaad ku ogaan doontaa sida loo abuuro nooc 3D oo wanaagsan oo qarxa Adobe Illustrator, Cinema 4D iyo Adobe Photoshop iyadoo la adeegsanayo aalado aasaasi ah oo farshaxankan lagu sameeyo.
Saamaynta qoraalka ee Adag iyadoo la isticmaalayo Waxyaabaha dhalaalaya iyo waxyaabaha isku dhafan
Casharkaan wuxuu ku tusi doonaa sida loo abuuro qoraal layaableh adoo adeegsanaya isku-dhaf dhalaalaya iyo isku-dar ah 7 tallaabo.
Saamaynta Aasaasiga Nashqada Qoryaha ee Photoshop
Casharkaan waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro nacnac nacnac sida qoraalka oo kale iyadoo la kaashanayo farsamooyin fudud oo Photoshop ah.
Abuur sawir sawir saameyn jel ah - Gelatinous Text
Casharkaan wuxuu ku bari doonaa sida loo sameeyo qoraalka Gel ee Photoshop, waxaad ku sameyn kartaa dhowr talaabo gudahood, adoo adeegsanaya qaabka lakabka Photoshop iyo astaamaha astaamaha, tani waa cashar aad u qurux badan oo sahlan.
Abuur Saamaynta ReneU Rene
Abuur xoogaa saameyn muuqata oo qabow leh si aad u qurxiso Nooca sawirka. Waxaad isticmaali doontaa isku-dar ah qaababka lakabka, isku-darka midabka, muraayadaha indhaha iyo sawirrada. Saamaynta dhamaadka waa wax la yaab leh waxaana rajeynayaa inaad soo qaadan doonto talooyin aanad horay u aqoon.
Abuur Saameyn Qoraal Cusub oo Retro ah oo ku saabsan Photoshop
Saameyntani waxay ku fiican tahay dhammaan noocyada mashaariicda, xaashiyaha, bogagga internetka, boorarka. Waxay si gaar ah ula shaqeysaa mashaariicda ku saleysan muusikada. Waxay kugu qaadan doontaa dhaqdhaqaaqyada nooca.
Abuur Qoraal Xarago Adiga Oo Isticmaalaya Saamayn Kala Duwan
Baro sida loo abuuro saameyntaas barkinta leh ee qoraalka.
Nooca 3D ee Photoshop
Casharkaan waxaad ku dul mari doontaa farsamooyin kala duwan oo aadan horey u arkin, sidoo kale farsamooyin badan oo kugu cusub ayaa kugu soo dhici kara. Ka dib markaad dhammayso socodkan ba'an inkasta oo, waxaad awoodi doontaa inaad sahamiso xitaa siyaabo cusub oo cusub oo aad ku abuuri karto aagag iyo sidoo kale noocyo kale oo fikrado ah.
Abuur Saameyn Qoraal Gaar ah oo Gubasho ah
Baro sida loo abuuro heer sare, saameyn qoraal gaar ah oo gubasho leh, taas oo meelaha qoraalka ololku dhab ahaantii ka baxo si loo soo bandhigo lakabka hoostiisa.
Abuur Saameyn Qoraal Gool
Ogow ow inaad abuureyso Saameyn Qoraal Gumeysi ah adoo adeegsanaya Filter Cajiib Cajiib ah oo kujira Photoshop.
Casharrada sharafta leh ee Starburst Photoshop
Casharradan Photoshop-ka ah ayaa ku tusi doona sida loo abuuro raad-raaca asalka ah ee bogagga, bogagga twitter-ka, iwm. Baro sida looga sameeyo qoraalka gadaashiisa asalka, ku dar walxaha boodhka iyo waxyaabo kale oo badan.
Ultra Glossy Liquid Birta qoraalka Saamaynta
Casharkaan waxaad ku baran doontaa farsamooyin inta badan ku saleysan qaabeynta qaabka lakabka iyo isku-darka goolal badan. Markii la isku daro, waxay siinayaan aragti qani ah, qoto dheer oo dhalaalaysa qoraalka.
Abuur Qoraal dhalaalaya & Saamaynta Photoshop
Baro sida loo abuuro saameyn qoraal dhalaalaya oo ku taal sawir-qaadaha.
Abuur saamaynta Qoraalka Muraayadda ee Photoshop-ka oo aad u kala-jajabiso
Casharradan oo ku saabsan hababka isku-darka iyo qaababka Lakabka. Wax ku ool ah, si loo gaaro saameynta qoraalka muraayadda, waxaan ku tijaabin doonnaa qaabab badan oo lakabyo ah oo si aad ah loogu baahan yahay si loo helo saameynta dhabta ah.
Abuur sawir-gacmeed qurux badan oo SF ah
Casharkaan waxaan ku abuureynaa asalka mosaiciga iyo qoraal qabow raadiya oo shucaac leh, isku dar labadan walxood waxaadna heli doontaa warqad layaableh oo desktop ah
Aurora Borealis Typopgraphy Waraaq
Tabobar weyn oo ku saabsan sameynta Aurora Borealis nabarrada sawirka
Samee Xayeysiis Badeecad dhalaalaya
Casharkaan, waxaad ku baran doontaa talaabooyinka iyo farsamooyinka ku lug leh sameynta xayeysiin shey dhalaalaya. Waxaad ku bilaabi doontaa sawir kayd ah oo ah kabaha Adidas, ka soo saar asalka, ka dibna ku dar waxyaabo kala duwan oo sawir ah si aad u abuurto xayeysiinta sheyga.
Qaab dhismeedka qaab-qoraaleedka qaab-dhismeedka
Abuur cashir duug ah qaab qorid qaab qoraal ah.
Sida loo abuuro saameyn qoraal oo la yaab leh
Casharradan ayaa ku tusi doonta sida loo abuuro saamayn qoraal xoog leh oo indho qabad leh adoo adeegsanaya dusha sare, qaababka is dulsaaran iyo isku darka farsamooyinka kala duwan.
Photoshop Saamaynta birta Grungy
Casharradan waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro saameyn qoraal adoo adeegsanaya qaabab ka yimaada sawirrada keydka. Sawirka ugu dambeeya waa sawir qadhaadh oo leh qoraal lagu iftiiminayo mugdiga.
3D Qaabka Maalinta Jacaylka (Casharrada Gaarka ah)
Casharradan waxaad ku dhex socon doontaa tallaabooyin kala duwan oo lagu abuurayo sawirkan. Farsamadan waxaa loo isticmaali karaa siyaabo kala duwan iyo waliba mowduucyo kala duwan maalinta Jacaylka.
Ka Samee Xirida Sawir-gacmeedka 'Psd Geek Wallpaper' xoqida
Casharradan, waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo gidaar dusha sare leh oo tayo sare leh oo lebiska ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 40 Casharro Cajiib Ah Oo Wax Ka Bedelista Qoraalka ah
Taasi waa naqshad fiican
Ku jawaab yepi8
Talaado 7 dijo
Waad ku mahadsan tahay inaad isiisay macluumaadka waxtarka leh. Waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay. Mahadsanid
Jawaab Friv 7
50 Fon oo cabsi leh
Xirmooyinka 'Confetti Pack': Feektoro, Burush iyo Textures